विदेश जाने बेला श्रीमतीलाई ‘सेक्स टोय’ उपहारः नेता र कलाकार पनि प्रयोगकर्ता ! - Khabar Break | Khabar Break
विदेश जाने बेला श्रीमतीलाई ‘सेक्स टोय’ उपहारः नेता र कलाकार पनि प्रयोगकर्ता !
यौनका बारेमा व्यक्तिपिच्छे फरक–फरक बुझाइ हुन सक्छ । तर एउटा समान धारणा के हुन्छ भने सबै यसमा गोप्यता चाहन्छन् । यौन शरीरको यस्तो आवश्यकता र चाहना हो जसलाई मान्छेले सधैँ नियन्त्रणमा नराख्न पनि सक्छ । चाहेको वेला यौन चाहना पूर्ति नहुन पनि सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा विकल्पका रूपमा सेक्य टोयहरू रोजाइमा पर्न थालेका छन् । नेपालमा पनि सेक्स टोयको माग बढ्दै छ ।
करिब चार महिनाअघिको कुरा हो । धनगढीकी सुविना (नाम परिवर्तन) ले काठमाडौंस्थित सेक्स टोय ९यौन खेलौना० पसलमा फोन गरिन् र भनिन्, ‘तपाईंलाई मेरो श्रीमान्ले केही भन्नुभएको थियो रु’ सुविनाले फोन गरेको अघिल्लो दिन उनका श्रीमान्ले पसल मालिकलाई फोन गरेका थिए । जो स्पेनमा बस्दै आएका थिए । उनले जिज्ञासा राखेका थिए, ‘त्यहाँ कस्ता खालका सेक्स टोय पाइन्छ रु मेरी श्रीमतीलाई पनि चाहिएको थियो ।’ पसलेले सम्पूर्ण जानकारी दिए । सो जानकारी श्रीमान्ले सुविनालाई सेयर गरेका थिए ।